Mashiinka buuxinta iyo daboolida
Tubbo laba qol ah
Mashiinka dhalada iyo mashiinka wax lagu xiro
Hengxing wuxuu kaqeyb galay shirkii 53-aad ee SHINA INTERNATIONAL BEAUTY EXPO
Carwadu waa carwada ugu quruxda badan ee lagu soo bandhigo dalka Shiinaha, ururinta mashiinno, qalab wax lagu duubo, alaabooyin daryeel shaqsiyeed, Wax soo saarka quruxda xirfadeed, qurxinta, Daryeelka Caafimaadka iyo wixii la mid ah. Mashiinnada 'Hengxing' ayaa si taxaddar leh loo diyaariyey, oo leh heer teknolojiyad heer sare ah, waxqabad sare leh; taxanaha Ultras ...
5 sababood oo loo doorto baakadaha tuubada inay yihiin weelka ugu habboon
Maalmahan, xirmooyin kala duwan ayaa loo isticmaalay qurxinta. Iyo isticmaalka tuubooyinka tuujinaya si weyn ayey u korayaan. Wareejinta iyo dabacsanaanta ayaa ka dhigtay weelka ugu fiican ee lagu buuxiyo shuruudaha kala duwan. Saaxiibtinimo u adeegso Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad daboolka ka rogto daboolka iyo qiiqa, adoo u hoggaansamaya daboolka ...
Faa'iidooyinka xiritaanka Xiinka
Ultrasonic waa nooc ka mid ah mowjad farsamo, kaas oo ka kooban nidaam koronto iyo nidaamka gariirka ultrasonic. Waa tamar farsamaysan oo isweydaarsiga soo noqnoqota, awoodda sare, taas oo ay ka baxdo awoodda wadista. Iyo xuduudaha iswaafajiyay sida ...
Shenzhen Hengxing Mashiinka Mashiinka Co., Ltd.